खाँदबारी अस्पताल आउनेले अनिबार्य हात धुनु पर्ने « Emakalu Online
खाँदबारी अस्पताल आउनेले अनिबार्य हात धुनु पर्ने
सङ्खुवासभा । विश्वब्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरसबाट बच्न जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा अनिबार्य हात धुने ब्यवस्था गरिएको छ । अस्पताल भित्र फोहोर सहितको ब्यक्तिहरुको प्रबेश रोक्ने उद्देश्यको साथ अस्पतालले अनिबार्य हात धुने ब्यवस्था गरेको हो ।
अस्पताल प्रवेशको लागि एक मात्र ढोका खुल्ला गरिएको र त्यस ढोका छेवैमा साबुन सहित बाल्टिनमा पानी राखिएको छ । अस्पताल प्रवेश गर्ने बिरामी तथा कुरुवाले साबुन पानीले हात धोएपछि मात्र अस्पताल प्रवेश गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको हो । हात धुनको लागि दश वटा बाल्टिनमा पानीको ब्यवस्था गरिएको छ । सम्भावित कोरोना भाईरस लगायतका सरुवा रोगहरुबाट बच्नको लागि यस्तो ब्यवस्था गरिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर सुन्दर श्याम झाले बताउनुभयो । यस कार्यबाट अस्पताल भित्र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु र अन्य बिरामीहरु संक्रमणबाट बच्ने निमित्त मेसु डा. झाको भनाई छ । हातको माध्ययमबाट पनि कोरोना भाईरस सर्ने भएकोले अनिबार्य हात धुने ब्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोनाबाट बच्नको लागि सवैले अनिबार्य मास्क लगाउन समेत जिल्ला अस्पतालले अनुरोध गरेको छ । अस्पतालमा भिडभाड नगर्न र अत्यावश्यक बाहेकका अरु अस्पताल भित्र बस्न रोक लगाएको छ । कोरोना भाईरस विरुद्धको औषधी हालसम्म पत्ता नलागे पनि संक्रमणबाट बच्न आफै सजग हुनु पर्ने अस्पतालका निमित्त मेसु डा. सुन्दर श्याम झाको सुझाव छ । नियमित ब्यायम गर्ने, स्वास्थ्य खानपानमा जोड दिने, सकरात्मक सोँचको विकास गर्ने लगायतका कार्यहरुले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि हुने डा. झाको भनाई छ ।
यसै विच, जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा सम्भावित कोरोना भाईरसको संक्रमित विरामीहरुको लागि आईसोलेसन वार्ड तयारी गरिने भएको छ । जिल्ला अस्पतालको बैठक हलमा ७ बेडको आईसोलेसन वार्ड निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिले उक्त हल खुल्ला रहेको र त्यसमा आवश्यक उपकरणहरु र बेड जडान गर्न लागिएको अस्पताल प्रसासनले जनाएको छ ।
आईसोलेसन वार्डमा कोरोनाको संकास्पद विरामीलाई राखिने र कोरोना पुष्टि भए त्यहि राखेर उपचार गरिने अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुमन शाक्यले बताउनुभयो । कोरोना भाईरसको संक्रमण भईहाले पुर्व तयारीको क्रममा वार्डको तयारी गर्न लागिएको शाक्यको भनाई छ । अध्यक्ष शाक्यको अनुसार एक हप्ता भित्र ७ बेडको आईसोलेसन वार्ड तयार भईसक्ने छ ।